WAA MAXAY BASKA BASKA: FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELADA JIDHKA BINI'AADAMKA - BOW
Qaanuunka Batun: halabuurka, isticmaalka, hantida faa'iidada leh iyo ka hortagga
Onion batun wuxuu leeyahay dhadhan aad u fiican waana mid aad u faa'iido leh jirka bini'aadamka. In our dalkeena, basasha this koray oo loo isticmaalo ma aha oo kaliya in karinta, laakiin sidoo kale in daawada. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa waxa uu yahay batun qaansada iyo codsigiisaba.
Basbeelka Batun: Kaloorida, halabuurka iyo qiimaha nafaqada
Suugaanta, basasha ciidda, toonta aan lahayn, fistula - Dhammaan magacyadan waxaa loo yaqaan 'bas-batun'. Kobciso aagahayaga aqalka dhirta lagu koriyo. Tilmaamaha basal-batun waa sida soo socota: qaybta dhulka hoostiisa ee geedka waa oval; dhulka kor ku xusan - caleemaha cagaaran ee cagaaran. Mararka qaarkood baalasha basasha waxay kori karaan ilaa mitir dherer ahaan.
Sannadka labaad ee horumarinta, qaansada wuxuu ku dhufan karaa fallaadh leh llorescence spherical. Waxay ka kooban tahay ubaxyo yaryar, oo markaa ka dib abuuri kara. Basasha waa qabow u adkaysta.
Onion batun wuxuu heystaa walxo kimiko ah. Waxay ka kooban tahay asiidh dufan leh, faytamiin, faytamiin, carotiin, fiitamiino kooxo ah B iyo C, E, K iyo PP, macro iyo mareey (potassium, magnesium, calcium, fosfooraska, sodium, birta), amino acids (methionine, isoleucine, lysine, leucine, phenylalanine, threonin).
Cunto khudradeed ka weyn, fiitamiinada, macdanta, borotiinka iyo saliida lagama maarmaanka ah ayaa ku urursan. Qaybta kaloriyada ee basasha-batun waa sida soo socota: 35 kcal halkii 100 garaam.
Qiimaha nafaqada ee batun basal:
Noocyo dufan leh oo dheellitiran - 0.01 g;
asiidh dufan oo dufan ah - 0.04 g;
ash - 0.35 g;
fiyuuska cuntada - 1.7 g;
biyaha - 89.11 g.
Qiimaha tamarta ee khudradda:
borotiinka - 13.51%;
dufanka - 6.55%;
Ma taqaanaa? Basal-batun waxa ku jira sonkorta dabiiciga ah oo ka badan tufaax iyo pear. Laakiin, cuntada, waa in aadan ka saarin cuntadaada, maadaama uu yahay gubi wanaagsan oo gubanaya. Waxaa jira xitaa cunto karis ah, taas oo aad u baahan tahay in aad cuntid maraq baska maalinle ah.
Faa'iidooyinka caafimaadka ee batun basasha
In baska-batun, sida guluubka caadiga ah, waxaa jira waxyaabo badan oo faa'iido leh. Xitaa waqtiyadii hore, waxay ogaadeen waxtarkeeda, sidaas darteed ma ahan oo keliya cunista, laakiin sidoo kale waxay ka sameysay dawooyin.
Baalalka batun basal waxa ku jira wax badan oo ah ascorbic iyo nicotinic acid. Thanks to saliid muhiim ah, basasha waxay leedahay dhadhan aan caadi ahayn iyo urta. Cunto cunista baskani waxay faa'iido u tahay wakhti kasta, hase yeeshee waxay qiimo badan geysataa xilliga gu'ga, sida dad badani u xanuunsanayaan beriberi waqtigan. 150 garaam oo basal basal ah ayaa ku jira heerka maalintii ee fiitamiinada A iyo C iyo 1/5 ee qiyaasaha kalsiyum iyo potassium. Basasha-batun ayaa loo isticmaalaa soo saaridda daawooyinka yareeya cadaadiska dhiigga iyo hagaajinta dabacsanaanta kilyaha. Carotene ku jira dhirta ayaa saamayn ugu leh haragga iyo xuubka xabka. Nafaqo-yaqaan badani waxay ku talinayaan inay isticmaalaan basal-batun, haddii dheef-shiid kiimikaad-buuqu uu dhibsado, waxaa jira dhagxaan kalyaha, cudur beerka ah, oo leh dysentery, gout, hypertension.
Sida loo isticmaalo baska baska ee daawada dhaqameed
Basasha-batun waa la dalbadaa ee daaweynta finanka. Si arrintan loo sameeyo, gooyaa 50 g basasha, ku shub 250 ml oo biyo ah karkaraya. U baahan tahay inaad ku adkaysato 1 saac, ka dibna adkee oo codso inaad dhaqdo.
Faleebo ee isticmaalka basal-batun qandho, cudurada habka dheef-shiidka iyo dhiigga. Si tan loo sameeyo, ku dar basasha iyo 70% aalkolada cabirka 1: 4 ilaa weel kasta. Waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato toddobo cisho, ka dibna adkee oo cab cabitaan 15-20 dhibcood oo ah 50 ml biyo qabow.
Tincture of batun basal ka soo ridaan laga bilaabo daal iyo daal. Waxaad u baahan doontaa 80 g oo ah basasha la jarjarey iyo 200 ml biyo karkaraya. Ka bacdi nus saac ka dib, xaddid faleebo iyo cab 200-250 ml 2 jeer maalintii kadib cuntada kadib.
Sameynta boomaatada batun basal, waxaad xoqin kartaa madaxa maqaarka. Tani waxay hagaajin doontaa oo kicineysaa kobaca timaha. Adiga oo isticmaalaya bas barkiis oo joogto ah, waxaa suurtagal ah in la kordhiyo caabbinta jidhka ee cudurada kala duwan.
Ma taqaanaa? Onion-batun wuxuu leeyahay aalado jeermiska ka fiican, sidaas darteed waa faa'iido leh in la cuno xilliga jiilaalka.
Dad badan ayaa ka yaabiya sida baska loo isticmaalo kariska. Waxay u egtahay basal caadi ah, laakiin tayada nafaqada way ka sareysaa.
Waxaa lagu daraa pickles, hilibka iyo kalluunka si ay u jilciso dhadhanka. Onion-batun ayaa si wanaagsan ula socda kebabs. Salaad kasta oo dhan waxay ku dabooli kartaa warshadan.
Salad leh batun basal
Mid ka mid ah noocyada salad ee saladh leh basal waxaad u baahan doontaa:
Basasha - 200 g;
labeen dhanaan ah ½ koob ama saliidda cuntada - 2 tbsp. l
Si yaryar u jar khudaar, ku dar labeen dhanaan ama subag iyo si wanaagsan u walaaq.
Taageerada salad cusub oo salad ah oo cusub ayaa isticmaali kara qariidad kale:
basasha - 150 g;
tufaax cagaaran - 2-3 rodol.
nuts la jajabiyey - 1 tbsp. l.
casiir tufaax cusub - 2 tbsp. l.
saliidda cuntada - 2 tbsp. l.
Si yaryar u jar barkada basasha, ku tufid tufaax, ku dar wax waliba sida ay iskudhafka iyo isku daraan.
Iskalaji leh barkad basal
Markaad ku darto basal-batun ilaa fuudka, dhadhanka saxanka waa mid aan caadi ahayn.
Leaves iyo afkoda (500 g) waa in la gooyaa dhererka qiyaastii 3 cm, karkariyo biyaha cusbaynaya, ka dibna isku laab midabeeyaha.
Ka dibna basasha la waraabiyey suugo oo ka kooban 2 tbsp. l yaanyo, karkariyo, biyo, 1-2 xabo oo toon ah iyo bur (1 tbsp. l), oo la dubay subagga.
Waa muhiim! Basal-batun oo laga tarjumay Laatiinka "Allium fistulosum" micnaheedu waa meel bannaan. Caleemaha khatarta ah ee dhirta ayaa ah meel bannaan oo dabacsan, sida silsiladaha casriga ah. Ganacsatada yurubiyeyaashu waxay kala saaraan cagaarka basal-batun ilaa basasha qaybta caleenta. Haddii ay leedahay qaabka warqadda "O" - waa batoon, haddii warqadda "D" waa guluub.
Kaydinta iyo hababka wax lagu goosto basbooska
Basasha-batun waxaa lagu keydin karaa qolka qaboojiyaha, weelka, oo kaliya si ay u bilaabaan waxay u baahan tahay in la dhaqo oo la qalajiyo. Sidaas darteed wuxuu jiifsan karaa ilaa shan maalmood. Caleemaha la qalajiyey oo la qalajiyey waxay leeyihiin nolol shafeeco oo dheer. On hababka kaydinta dheer ee batun basasha waxaa laga heli karaa hoos.
Basasha boobka la qalajiyey
Waxaa jira saddex siyaabood oo la beeri karo basasha la qalajiyey:
Warshadu waxay kudartaa xididada, caleemaha cirridka iyo qaybta cad. Tubbooyinka waa in la maydhaa oo la qalajiyaa, ka dibna jarjar dhererkiisu 4-5 cm oo gashana shaandho, oo leh faashad. Dhammaan waxaas ayaa ku haray hoostooda. Inta lagu jiro qalajinta, batun waa in mararka qaarkood la isku qasan yahay.
Xidho boogaha nadiifka ah ee warshadda ku xir xirmooyinka oo ku xir xadhig meel dhexdhexaad ah oo hawo leh.
Boogaha nadiifi waa in la gooyaa ilaa 2 cm oo la qalajiyo foorno 50 ° C oo aan ka badneyn 3 saacadood. Ka dibna u qalaji hawada furan ilaa 10 saacadood.
Biyo subag leh saliid
Wixii 1 kg ee basasha, 200-250 g oo milix ah ayaa loo baahan yahay. Ku dhaq oo qallaji dhirta 'dhirta', ku rid weel kuna dar milix iyo isku dar. Ka dibna ku faafi dhalooyinka barxameysan, si taxadar leh u xirxir ilaa casiirkuna u muuqdo, oo ku shub saliida saliidda kulul, ka dibna duub. Ku hay meel qabow.
Basasha caleenta (basasha)
Diyaarinta dharka aad u baahan tahay: 1 kg ee basasha, 3 caleemo, 10 g of allspice, 1 l oo biyo ah iyo 100 g oo cusbo ah. Dhamaan waxay ku ridaan baaquli, ku shub qajaar la qaboojiyo oo kudhow faashad. Ka dibna geli wareega, gawaariga saar oo ka bixi fasax toddobaad iyo nus ah heerkulka qolka. Ka dib markii muddada halsano ku rid meel qabow ah.
Basasha caleenta (cagaarka)
Waxaad u baahan doontaa: dhirta cagaaran, 1 litir oo biyo ah iyo 100 g oo cusbo ah. Brine waa in la kariyaa oo la qaboojiyaa. Ku dhaq basasha, iyaga oo qalaji iyo meel calaacal ah, lagu rusheeyey brine 5 daqiiqo.
Ka dibna ka saar baska, waxoogaa cadaadi oo si taxadar leh u tamphir barmiil. Dabool dabool oo ka bixi maalin maalin ah qolka. Maalin ka dib, hubi heerarka brine, haddii loo baahdo - ku dar oo ku rid meel qabow.
Boobka basasha oo la kariyey
Si aad u sameyso batun basal leh waxaad u baahan doontaa: 1 kg oo basal, 1 litir oo biyo nadiifa ah, 125 g oo cusbo ah, 800 ml oo ah 6% suuf, 20 g oo dill ah, 1 tsp. dill abuur, 1 tsp. allspice iyo sonkorta.
Beerta basal waxay u baahan tahay in la dhaqo oo qalajiyo, gooyaa 3-4 cm dheer, ka dibna ku shub brine iyo meel qabow dhowr maalmood, ka dibna godka brine, iyo basasha baakadaha. Karkari dareeraha, ku shub dhalooyinka, dabool, nadiifin iyo isku ururin.
Basbeelka baaliga ah
Basasha-batun-yare waxay u baahan tahay in la dhaqo, jar jartey oo ku rid digsi. Markaa waxaad u baahan tahay milix ilaa dhadhankaaga, ku dar biyo iyo isku kari dhowr daqiiqo, ka dibna ku shub tuubooyinka oo isku xidha.
Dhib beelka basbaaska
Kuwo badani waxay aaminsan yihiin in baska baska waxyeelo u geysan karo jirka bini'aadamka, laakiin tani run maaha. Kaliya kiimikooyinka lagu isticmaalo geedaha aqalka dhirta lagu koriyo waxay saameyn xun ku yeelan karaan bini'aadamka. Warshadda waxaa lagu daaweyn karaa sunta cayayaanka, kadibna waxay noqon kartaa qiyaas weyn oo ah Nitrate.
Noocyada jidhka ee aadanuhu maaha mid cabsi badan, waxyeelo ayaa sababi kara waxyaabo raadraac ah oo lagu sameeyay caloosha Nitrate. Markaad soo gasho nitratesku waxay keeni kartaa gaajo oksijiin. Isticmaalka basal-batuun waa ka mamnuuc dadka u leh dulqaad la'aan.
Waa muhiim! Isticmaalka boobka basasha laguma talinayo dadka qaba boogaha caloosha ama boogaha duodenal, gumaacis iyo caabuqa beeryarada. Isticmaalka badan ee warshadu waxay sababi kartaa xanaaq badan.
Batun basbeedku waa wakhti ah oo kufilan waxtarka jidhka bini'aadamka wuxuuna ku siin karaa fiitamiino qiimo leh, waxa kaliya oo ay waxyeeli kartaa dadka qaba cudurrada qaarkood. Markaad samaysay diyaarintiisa, waxaad buuxin kartaa jirkaaga maadooyin waxtar leh xilliga jiilaalka.